ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှာ အလုပ်လုပ်ပါသလား။ ကြိုတင်ကာကွယ်ပါ။ လူတွေကို အသိပညာပေးပါ။ - Hello Sayarwon
Dr. Thurein Hlaing Win မှ ရေးသားသည်။ 13/01/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးမယ့် ဆရာဝန်နဲ့ မိဘများအကြားက သဘောတူညီမှု – ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးစရာတွေရှိနေတာ ဒါမှမဟုတ် စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေမှုက အချိန်နဲ့အမျှဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့် ဆရာဝန်တွေနဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတိုင်းမှာ မိဘတွေအနေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်။ သင်က ကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတာဆိုရင်မိဘတွေအနေနဲ့ ကလေးကိုထိုးနှံပေးမယ့် ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အယုံကြည်ရဆုံးက သင်ဖြစ်မှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ရင်သွေးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးဖို့ ကိစ္စမှာ စိတ်အပူဆုံးနဲ့ မေးစရာအများဆုံးရှိမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်က မိဘဆိုတာတော့အသေအချာပါ။ သင်အနေနဲ့ ကလေးရဲ့ မိဘတွေနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားမယ်ဆိုရင် ကလေးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံဖို့အကြံပေးရာမှာ ပိုပြီးအထောက်အကူပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကာကွယ်ဆေးအကြောင်းနားလည်အောင်ရှင်းပြရာမှာရော ကာကွယ်ဆေးရွေးချယ်ပေးရာမှာပါ ထိရောက်မှုရှိမှာပါ။ မိဘတွေနဲ့ ရင်းနှီးပွင့်လင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးပိုင်ဆိုင်ထားမှုက ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် တော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပေးနိုင်မှာပါ။ သင့်အနေနဲ့ မိဘတွေနဲ့ ကလေးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးဖို့ အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးတော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေကို စဉ်းစားထားသင့်ပါတယ်။
HPV ဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုအကြောင်း တစေ့တစောင်း
Human papillomavirus (HPV) သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေး
Human papillomavirus (HPV) ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လိင်ဆက်ဆံမှုကနေတဆင့်အရေပြားချင်းထိတွေ့မှုကြောင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ ကူးစက်မြန်ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းက HPV ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်ပြီး သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာခံစားရမှုရဲ့ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းက HPV ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစား ၁၆ နဲ့ ၁၈ ကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။ HPV ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး နှစ်မျိုးကို စမ်းသပ်ထုတ်လုပ်ထားပြီးပြီဖြစ်ပြီး WHO (ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး) ရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုနဲ့ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ လက်တွေ့အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ လေးမျိုးစပ် ကာကွယ်ဆေး (Quadrivalent vaccine) က အပေါ်က နှစ်မျိုးအပြင် လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ကိုဖြစ်စေတဲ့အခြား HPV ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစား ၆ နဲ့ ၁၁ ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်တွေရဲ့ လိင်အင်္ဂါ တဝိုက်ကြွက်နို့တွေ ဖြစ်စေနိုင်ခြေက ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိပါတယ်။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာက ကမ္ဘာတစ်လွှားက အမျိုးသမီးတွေကို အသက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေတဲ့ ဒုတိယမြောက်အကြောင်းအရင်းဖြစ်ပါတယ်။ HPV ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတာ၊ သားအိမ်ခေါင်းစစ်ဆေးမှုခံယူတာနဲ့ အခြားသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်တာက သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဝေဒနာတွေနဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာေကြာင့်သေဆုံးမှုတွေကို အထိရောက်ဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းပါ။
သင့်အနေနဲ့ သင့်ရဲ့လူနာ နဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ မိဘတွေထံကနေ HPV ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းတာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာအပါအဝင် HPV ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေကို ကာကွယ်နိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်မေးမြန်းတာတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ သင့်အနေနဲ့ HPV ကာကွယ်ဆေးက ဘယ်လောက်ထိ ထိရောက်မှုရှိပြီး ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးရပါမယ်။ ဒါမှလည်း မိဘတွေက စိတ်ချလက်ချနဲ့ ကလေးတွေကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့ ဖြစ်နိုင်မှာပါ။
HPV ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ။
HPV ကာကွယ်ဆေးကြောင့် အဖြစ်များတဲ့ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုတွေက အရမ်းပြင်းထန်တာမျိုးမရှိပါဘူး။ အချိန်တိုအတွင်းမှာ သက်သာသွားနိုင်ပါတယ်။ နာတာ၊ ဆေးထိုးထားတဲ့နေရာက နီလာတာ၊ အဖျားတက်တာ၊ မအီမသာဖြစ်တာ၊ခေါင်းကိုက်တာ နဲ့ ကိုယ်လက်တွေထဲကနုံးချိတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ကြီးကြီးမားမားထိခိုက်မှုများ။
HPV ကာကွယ်ဆေးကြောင့် ပြင်ပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်တာမျိုး တော့မရှိပါဘူး။ Anaphylaxis လို့ခေါ်တဲ့ အသက်အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်တဲ့ ဓါတ်မတည့်ပြင်းထန်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုကတော့ ဖြစ်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုမျိုး ဆိုးကျိုးသက်ရောက်တာက HPV ကာကွယ်ဆေးကြောင့်ပဲဖြစ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကာကွယ်ဆေးတိုင်းလိုလိုမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့သူတွေကို ဒီအခြေအနေကို ကောင်းကောင်းဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ သင်ထားပေးပြီး ချက်ချင်းအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကနေတဆင့် ထိခိုက်မှုမရှိအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။
HPV ကာကွယ်ဆေးက စိတ်ချရလား
HPV ကာကွယ်ဆေးတိုင်းက စိတ်ချရတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးတွေကို အစောပိုင်း စမ်းသပ်မှုတွေအတွင်း လူထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ စမ်းသပ်ပြီးမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်အောင် ဖြန့်ဖြူးပေးခဲ့တာပါ။
HPV ကာကွယ်ဆေးက မျိုးအောင်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သလား
မထိခိုက်စေနိုင်ပါဘူး။ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ လေ့လာစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေအရ HPV ကာကွယ်ဆေးက မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းအပေါ်ထိခိုက်စေတာမျိုးမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။
HPV ကာကွယ်ဆေးက ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို ကူးစက်ပြန့်နှံ့စေတာ၊ ကင်ဆာဖြစ်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်လား
HPV ကာကွယ်ဆေးက ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို ကူးစက်ပြန့်နှံ့တာမျိုးမဖြစ်စေသလို ကင်ဆာလည်း မဖြစ်စေပါဘူး။
HPV ဗိုင်းရပ်စ်က လိင်ဆက်ဆံမှုကနေတဆင့်ကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုပြီး ဘာလို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ တိုက်တွန်းရတာလဲ
HPV ကာကွယ်ဆေးက ရောဂါပိုးနဲ့ထိတွေ့ကူးစက်မှုမရှိခင်မှာ အထိရောက်ဆုံးဖြစ်တာကြောင့် ကလေးတွေကို လူပျိုဖော်၊အပျိုဖော်မဝင်ခင်မှာ ထိုးပေးတာက အကောင်းဆုံးပါ။ အသက်ငယ်လေလေ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့အခါ ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုကကောင်းမွန်လေလေပါ။ သဘောကတော့ ကလေးတွေကို ငယ်ရွယ်စဉ်မှာကတည်းက HPV ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးထားတဲ့အခါ ရှေ့လျှောက်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ HPV ဗိုင်းရပ်စ်အန္တရာယ်ကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်ရာရောက်တယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။
ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးလိုက်တာက လိင်ဆက်ဆံဖော်အများကြီးနဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်ပေးရာရောက်လား
မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ HPV ကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်တာကြောင့် လိင်ဆက်ဆံဖော်အများကြီးနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားမျိုးတွေမတွေ့ရပါဘူး။ လေ့လာမှုတွေအရ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့သူတွေဟာ ပုံမှန်ထက် မြန်မြန်အရွယ်ရောက်ပြီး လိင်ဆက်ဆံတာမျိုးမရှိသလို လိင်ဆက်ဆံနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်တာနဲ့ အခြားသူတွေထက်ပိုပြီး လိင်ဆက်ဆံမှုတွေလုပ်ကြတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူး၊ လို့သိရပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းဖြင့် HPV ကာကွယ်ဆေးမထိုးနှံဘဲနေလို့ရလား
လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ ကွန်ဒုံးအသုံးပြုတာက လိင်ဆက်ဆံမှုကနေတဆင့် HPV ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တာကိုပဲကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ HPV ဗိုင်းရပ်စ်က ကွန်ဒုံးနဲ့ ကာကွယ်ထားတာမျိုးမရှိတဲ့ အရေပြားနေရာတွေမှာ ရှိနေပြီး လိင်ဆက်ဆံစဉ်အရေပြားချင်းထိတွေ့မှုကနေတဆင့် ရောဂါကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ကလည်း လူနာတွေကို HPV ကာကွယ်ဆေးက ထိုးထားတာက HPV ဗိုင်းရပ်စ်အားလုံးကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း သေချာပြောပြဖို့လိုပါမယ်။ သားအိမ်ခေါင်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့ အကျိတ်တွေနဲ့ ကင်ဆာရဲ့ အစောပိုင်းအဆင့် အနာတွေအဖုအကျိတ်တွေကို ကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ သားအိမ်ခေါင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကို သေချာရှင်းပြပေးရပါမယ်။
HPV ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့ မိဘတွေ အမေးများတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ မိဘတွေကိုအကြံပေးတိုက်တွန်းတဲ့အခါ အောင်မြင်မှုရရှိစေဖို့ အတွက် အသုံးပြုသင့်တဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံပုံနည်းလမ်းတွေက
ကလေးငယ်ကို မိဘတွေအနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးရေးအတွက် အောင်မြင်အောင် စည်းရုံးပြောဆိုနိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၂ မျိုးရှိနေပါတယ်။ နည်းလမ်းနှစ်ခုစလုံးမှာ အခြေခံကျတဲ့အချက်တွေက မိဘတွေအနေနဲ့ရော ဆရာဝန်အနေနဲ့ပါ ကောင်းကောင်းနားထောင်ပေးဖို့လိုပါမယ်။ မေးခွန်းတွေအပြန်အလှန်မေးရင် သတင်းအချက်အလက်တွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါမယ်။
ဒီနည်းလမ်းတွေက မိဘတွေနဲ့ ဆရာဝန်တွေကြားမှာ ပွင့်ပွင်းလင်းလင်းလင်း ရိုးရိုးသားသား နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတစ်ခုကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိဘတွေက ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါ သေချာအာရုံစိုက်ပြီး အချိန်ပေးနားထောင်ပေးပါ။
ကိုယ့်အနေနဲ့ အလုပ်များနေရင်တောင်မှ မိဘတစ်ယောက်က လေးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာရောက်ဆွေးနွေးတဲ့အခါ အချိန်ပေးပြီး ဆွေးနွေးပေးပါ။
စကားပြောတဲ့အခါ မျက်လုံးကိုသေချာကြည့်ပြီး ပြောပြနေတဲ့အကြောင်းအရာကို သေချာနာလည်အောင် နားထောင်ပေးပါ။ အဖြေကို ပြန်မဖြေခင်မှာလည်း အချိန်ယူသေချာစဉ်းစားပြီးမှာ ပြန်ဖြေပေးပါ။ သေချာပြင်ဆင်ပြီးမှ အဖြေကိုပြန်ဖြေပေးပါ။
သင့်ရဲ့ စိတ်ပါဝင်စားစွာနားထောင်နေမှုက ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့အတွက် မိဘတွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုမှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါတယ်။
မိဘတွေကကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးချင်ပေမယ့် စိုးရိမ်နေပုံရတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘက်ကနေ မေးထွက်လာအောင် လမ်းကြောင်းပေးပါ။ ကိုယ့်ဘက်ကဖော်ဖော်ရွေရွေ နွေးနွေးထွေးထွေး နဲ့ စကားစပြောပေးရင်း သူတို့ရဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ ပြဿနာတွေကို နားထောင်ပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိနေတယ်ဆိုတာကို သိရှိအောင်လုပ်ပေးပါ။
ကိုယ်တိုင်က ကလေးငယ်တွေရဲ့ မိဘနေရာမှာ ဝင်ခံစားပေးပါ။ မိဘတွေရဲ့ စိုးရိမ်မှုနဲ့ ပူပန်မှုကို အပြည့်အဝနားလည်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါ။ မိဘတွေအတွက် ကလေးကျန်းမာဖို့က အဓိကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်လောက်ထိစိုးရိမ်ပူပန်နေမလဲဆိုတာကို သိနားလည်တဲ့အကြောင်း ပြသပေးပါ။
မိဘတွေအနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့ ဝဘ်ဆိုက်ကနေ ဒါမှမဟုတ် အခြား တစ်နေရာရာကနေ ကူးယူလာပြီး သင့်ကို လာရောက်ပြသဆွေးနွေးတဲ့အခါ သူယူလာတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဘာသာပြန်ပြောပြပေးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ ရိုသေယုံကြည်မှု အားနည်းသွားနိုင်တာကြောင့်ပါ။ အဲ့ဒီလိုပြောမယ့်အစား HPV ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လုပ်ထားတဲ့ သုတေသနတွေအကြောင်းနဲ့ ကိုယ်သိနားလည်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြပေးပါ။ ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက မိဘတွေအနေနဲ့ သိချင်နေတဲ့ အဓိကကျတဲ့ အကြောင်းအရင်းဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။
တကယ်လို့ သင်အနေနဲ့ မိဘတွေမေးတဲ့ မေးခွန်းအပေါ်မှာ သေချာအာရုံမရှိတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေမယ်။ သင်ပြန်ပြောပြနေတဲ့ အကြောင်းအရာက သူတို့သိချင်လို့မေးတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ လွဲနေမယ်၊ ဆိုရင်တော့ သင်နဲ့ ကလေးငယ်ရဲ့ မိဘတို့အကြားက ပြောဆိုမှုက အဆုံးသတ်သွားမှာပါ။ ဒီလိုမျိုး စကားစပြတ်သွားတာနဲ့အတူ ဆုံးရှုံးသွားမှာက သင့်အပေါ်မှာထားတဲ့ ယုံကြည်မှုပါပဲ။
HPV Vaccine Safety and Effectiveness.
https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/hpv/hcp/safety-effectiveness.html Accessed February 28, 2018.
Moscicki, A. and Palefsky, J. (2011). Human Papillomavirus in Men. Journal of Lower Genital Tract Disease, 15(3), pp.231-234.
https://kidshealth.org/en/parents/hpv-vaccine.html Accessed February 26, 2018.
Immunization, Vaccines and Biologicals.
http://www.who.int/immunization/topics/hpv/en/ Accessed February 26, 2018.
http://www.cbc.ca/news/health/hpv-men-1.4358091 Accessed February 26, 2018.